Umthandazo kuShadow of Saint Peter ➡ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ngamaxesha amaninzi ungangqongwa ngabantu abanomona nabakhohlakeleyo, kananjalo ungasondela kwiingozi ezininzi ungaqapheli, ngenxa yesi sizathu, kubalulekile ukuba uzikhusele kwaye yiyo loo nto sikuzisela oku kunamandla Umthandazo kuShadow of Saint Peter, Ukuze wenze ikhaka lokukhusela.
1 Umthandazo osethunzini likaPeter oyiNgcwele ubhekiswa kubani?
2 Kutheni ubalulekile lo mthandazo kwiNgcwele uPeter?
3 Umthandazo kuShadow of Saint Peter
4 Yintoni iSithunzi seNgcwele uPeter?
5 Myalezo mni esiwufumanayo kwesi sivakalisi?
6 Uninzi lweevesi ezifanelekileyo zeBhayibhile
6.1 UMateyu 8:14
6.2 UMarko 1:29
6.3 Yohane 1: 14
Umthandazo osethunzini likaPeter oyiNgcwele ubhekiswa kubani?
Ungayichaza kanjani Peter kumazwe ahlukeneyo neelwimi? Akufa uYesu, waba yinkokheli yebandla lamaKrestu. Wathandaza, wamkhusela uYesu, kwaye wamkela abantu abatsha kubuKristu bokuqala.
Ngaphandle kwamathandabuzo, uSanta Peter uyaziwa namhlanje njengomgcini-sango wezulu. USanta Peter uthathwa njengomseki weCawa yamaKatolika, ukongeza ekubeni usondele kakhulu kuYesu Krestu, ngenxa yesi sizathu kukuba uYesu ubeke lonke ithemba lakhe kuye kwaye nawe ungenza okufanayo ngomthandazo nokholo.
Kutheni ubalulekile lo mthandazo kwiNgcwele uPeter?
Ngamaxesha amaninzi obomi bethu singangqongwa ngabantu ababi, iingcinga ezimbi kunye neengozi ezahlukeneyo, ngalo mthandazo uya kuba nakho ukucela kwaye ubongoze uSanta Peter ukuba akhusele, asuse zonke izinto ezimbi ezifuna ukukwenzakalisa.
Ngomthandazo, uya kukukhathalela ukukuguqula ube ngumntu ongabonakaliyo wobubi, ukuze kungabikho nto kwaye akukho mntu unokukwenzakalisa. Ngenxa yesi sizathu kukho usuku ngokukodwa kuye, lo nguJuni 29, apho kukhunjulwa ukholo eRoma lwabapostile uPawulos waseTarso noSimon Peter.
Owu uzukisiwe umpostile oNgcwele uPeter! Isikhokelo sabafundi beNkosi yethu ehlangulayo, ababengabokuqala ukubhengeza uYesu Krestu uNyana kaThixo noMesiya wethu, ndiphulaphuleni nize kum nazo zonke izicelo zam. U-Saint Peter oZukileyo, ububizwa ngokuba "nguMlobi waBantu", nina nifumene itayitile yeLitye lecawa.
Nguwe kuphela ogcina amasango ezulu, ohlala enceda abasweleyo emhlabeni, ndiyakucela ukuba undigubungele undikhusele ngesithunzi sakho esinamandla, ungandishiyi; USanta uPeter usikelele, ndihlangule kubo bonke ububi obunditshutshisayo. Ndikhusele kubo bonke ububi nezifo, gcina uthotho, ukuthakatha, ubugqwirha, ubuxoki, umona, inzondo, amehlo amabi, amatye asendleleni, kwiintolongo nakwimixokelelwane.
I-Saint Peter yasezulwini, hlambulula iindlela zam, gxotha abakhohlakeleyo, ugxothe iintlungu nomenzi wobubi; Ndikhathalele kubo bonke ububi nomngcipheko, kutshaba nangamaxesha amabi. Yiba amandla am, inkxaso yam kunye nentuthuzelo yam, ndiyakubongoza ukuba ube yindawo yokuzikhusela, ndiboleke isithunzi sakho kwaye undikhathalele, namhlanje ndiyakucela oku.
Owu Petros othandekayo! UnguMpostile oyiNgcwele weNkosi yethu, sukuzityeshela izicelo zam, thobela isicelo sam; wena ungumkhuseli, ozalana nomhlobo wabo bafuna uncedo lwakho, wena unceda abona bahlelelekileyo kwaye uzogquma ngesithunzi sakho sobubi, sijonge kwaye usikhathalele ngokulunga kwakho okungcwele. Sikucela oku ngeNkosi yethu uYesu Krestu, ophilayo olawula kubunye bukaYise, uMoya oyiNgcwele, ngonaphakade kanaphakade, sikucela oku, Amen ».
Yintoni iSithunzi seNgcwele uPeter?
Ukuthandaza kwisithunzi sikaPeter oyiNgcwele kunamandla kakhulu kwaye kusetyenziswa xa uziva ukuba kukho amandla amaninzi amabi kwindawo yakho anokukuchaphazela. Sithetha ngeemvakalelo ezinje ngeliso elibi okanye umona wabanye othi, ekugqibeleni, uthintele ukukhula kwethu. Unokoyisa naluphi na uhlobo lomqobo, ukuze uphinde ufumane ukuzithemba ekufezekiseni zonke iinjongo.
«UnguPetros wena, kwaye ndiza kuyakhela phezu kwam icawa yam«. UYesu wasebenzisa la magama ukuchaza uPeter oyiNgcwele, kwaye ngokuseka isiseko sobuKristu kumpostile, wabonisa ukuthembela kwakhe ngokupheleleyo kuye. U-Saint Peter wayengupopu wokuqala weCawa yamaKatolika kwaye wanikela ngobomi bakhe ngenxa yokholo lwakhe. Ilifa lakhe liguqulwa libe lukholo, ukuzithemba nokunyamezela.
Amagama aqhelekileyo kunye aqhelekanga eneenfayile Peter.Amagama aqhelekileyo kunye aqhelekanga eneenfayile Peter. UPeter noSimon bacele ukuba baphose iminatha yabo emanzini, yiyo loo nto umzekeliso wesikhundla sompostile ungo "Umlobi wabantu".
NjengoSanta uPeter uhlala esecaleni likaYesu ngalo lonke ixesha, nditsho nasekufeni kwakhe, kuthiwa kwiShadow of Saint Peter singayifumana iNkosi yethu enguSomandla.
Myalezo mni esiwufumanayo kwesi sivakalisi?
Umyalezo wokuqala obalaseleyo ebomini boMpostile uPeter oNgcwele yayikukuthembana kunye nokoyisa ubuthathaka. Kuyinyani ukuba kwezinye iziqendu ungumntu osolwayo, kodwa nangona kunjalo uyakwazi ukuyoyisa.
Ukuthandaza emthunzini ka-Saint Peter kusivumela ukuba sibange ukhuseleko ngoncedo lompostile obalulekileyo kwimbali yamaKatolika, owoyisile ubuthathaka bakhe kwaye akakhange akwazi ukwenza umsebenzi omkhulu. Ukuhlala emthunzini kaPeter oyiNgcwele kuthetha nje ukunikezela kwintando kaThixo kunye noPeter Peter ngokwakhe njengekhonkco. Ngawo onke amaxesha, zibulele wena kunye nabanye ngobubele bakho obukhulu.
Uninzi lweevesi ezifanelekileyo zeBhayibhile
Phakathi kweendinyana ezifanelekileyo sinokufumana uSanta Peter ngamaxesha onke, njengoko besesitshilo ngaphambili, uthathwa njengesitshixo kumnyango wezulu.
"Xa uYesu efika endlwini kaPetros, wabona umkhwekazi wakhe elele ebhedini enomkhuhlane."
"Emva kokuphuma kwindlu yesikhungu, baya kwaSimón naseAndrés benoSantiago noJuan."
Yohane 1: 14
"UFelipe wayevela kwisixeko saseBhetsayida, isixeko esinye neAndrés kunye nePedro."
Ungafunda ngale khonkco, ukuba sikushiya ngezantsi kwezinto ezintle Dumisa uMariya umthandazo.